Masityhile kwaye simise imigangatho yabucala | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 7, 2010 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Njengoko uGoogle noFacebook baqhubeka nokulawula, apho are enkulu wabucala xhalaba ezikhuliswe kwi-Intanethi… kwaye kufanelekile.
Singaphikisana imini yonke ngendlela iisayithi ekufanele ukuba ziqokelela ngayo, zisebenzisa okanye zide zithengise idatha yakho yobuqu ...
Kukho amanqaku aphambili endikholelwayo:
Ayiloxanduva lwenkampani ukuthatha isigqibo ngendlela yokusebenzisa ulwazi lwakho wakube ungayiboni ngokungaboni uxanduva lwakho.
Kwelinye icala, abathengi abazi ukuba iinkampani ziyisebenzisa njani idatha yazo -Ngoko ke bacaphukile ngokufanelekileyo bakufumanisa ukuba isetyenziswe ngendlela ebebengayilindelanga. Amaphepha kunye namaphepha okhetho oludidayo kunye neenkcazo zabucala ezingenanto ngaphandle kwe-legalese enemingxunya ubungakanani beTexas ukuhamba kuyo ayisiyo mpendulo.
Ukuba inkampani iyayiqokelela le datha, luxanduva lwabo ukukhusela endaweni ukuqinisekisa ukuba kuphela ngabasebenzi abagunyazisiweyo abanokufikelela kuyo.
Endaweni yokuphikisana ngezibonelelo okanye umthetho wobumfihlo, kutheni singekho endaweni yoko Gxila kumzi wabucala ukuze usebenze kunye neenkampani ukuvelisa inkqubo emanyeneyo yokunxibelelana ngokufanelekileyo nendlela idatha yakho yobuqu esetyenziswa ngayo. Ngokufana Commons Creative yimpendulo yomthombo ovulekileyo kulawulo lwamalungelo edijithali, kufanelekile ukuba sibe neMfihlo yabucala ukuba umthengi akwazi ukuyetyisa ngokulula ukuze ayiqonde. Eminye imizekelo inokuba:
Nokuba yeyabo okanye hayi idatha iyathengiswa kwiqela lesithathu.
Nokuba yeyabo okanye hayi idatha iyafumaneka ngabantu besithathu.
Nokuba yeyabo okanye hayi idatha iqokelelwa ngokungaziwayo kwaye yahanjiswa kwiqela lesithathu.
Nokuba yeyabo okanye hayi idatha iqokelelwa ngokungaziwayo kwaye yahanjiswa ngaphakathi.
Nokuba yeyabo okanye hayi idatha isetyenziselwa ubuqu ekujoliswe kuko.
Nokuba yeyabo okanye hayi idatha isetyenziswa ngokungaziwayo ukujolisa.
Nokuba yeyabo okanye hayi Imisebenzi ilandelwa ngokobuqu.
Nokuba yeyabo okanye hayi imisebenzi ilandelwa ngokungaziwayo.
Kunye nokuba idatha iyalandelwa kwaye ihanjiswe, singachaza ukuba isetyenziswa njani:
Ukubonelela ngamava abathengi awodwa.
Ukubonelela ngezibonelelo ezenzelwe wena kunye nentengiso.
Ukuphucula umgangatho wemveliso iyonke.
Iinkampani zinokuya kude zikhuphe idatha yobuqu kumthengi. UGoogle uyiqalisile le yabo Ulawulo lweAkhawunti ikhonsoli, apho ndingajonga khona olunye ulwazi, nditshabalalise imbali yam, okanye ndibanqande ekusebenziseni.
Njengomthengisi kunye nomthengi, andifuni yeka iinkampani ekusebenziseni idatha yam. Ndiyakholelwa ukuba njengoko iinkampani ziqhubeka nokuqokelela ulwazi ngam, bayakwazi ukundisebenzela ngcono. Njengomzekelo, ndicinga ukuba kulungile ukuba iApple iyazi ilayibrari yam yoMculo, umzekelo, kuba ngenene benza izindululo ezithile ezikrelekrele ngokusekwe kwimbali yam.
tags: IinkcukachaUkhuseleko Lwadathawabucala
Ngaphandle kwamaQabane-Ukwakha ukuThengisa iTshaneli